Safarkaygii Islaamka: Bruce waxa uu ahaa Kiristaan aan qanacsanayn | Somaliska
Maanta waxaan qaadaneynaa qisadii ugu horeysay ee ku saabsan Muslimiinta cusub ee diinta Islaamka qaatay. Ninka lagu magacaabo Bruce Paterson waxaa uu ahaa nin Kiristaan ah oo aan ku qancin diintiisa. Hadaba isaga ayaa nooga waramaya wadadii uu u soo maray Islaamka.
Waxaan jeclahay in aan idinla wadaago safarkii aan u soo galay Islaamka aniga oo aaminsan in ay waayo aragnimo u noqon karto dadka kale. Dhamaanteen waxaan ka soo jeednaa dhaqamo kala duwan iyo diimo kala duwan oo dadku ay ku jahwareereen. Markii aan u fiirsano aduunyada waxaan aragnaa waa dagaal, faqiirnimo iyo dambi. Balse markii aan fiirino qaabkii aan u soo kornay waxaa muuqata in inteena badan aan iska indho tirayno dhibaatadaas.
Dadka badankoodu waxay go’aansadaan in ay ka leexdaan xaqiiqada nolosha oo aysan isweydiin su’aalaha muhiimka ah sida Waa maxay xaqiiqadu? Maxaa aduunka i keenay? Sababta noloshu waa maxay?
Aniga oo jawaab u raadinaya su’aalahaas ayaan bilaabay safarkayga oo ila soo maray wado dheer. Waxaan ka dhashay reer Kiristaan ah sida caadiga ah baaritaanka waxaan ka bilaabay diinteyda. Waxaan bilaabay in aan akhriyo Baybalka iyo in aan su’aalo waydiiyo baadariga. Jawaabta aan helay waxay ahay “Cakhiido yeelo”. Baybalka waxaan ka akhriyay hadalo badan oo is khilaafsan. Waxaan iswaydiiyay. Ilaahay hadalo isqilaafsan kuma hadlo?
Waxaan go’aansaday in aan isaga tago Kiristaanka iyo xitaa aanan firin diinta Yuhuuda oo waxaan xaqiiqsaday in ay yihiin diimo wax laga badalay. Waxaan wajahay diimaha Aasiya sida Budhisimka iyo diimaha qabiilada. Qaasatan waxaan mudo ku biiray Budhisimka oo madaxayga uu ku dagay balse aanan wax jawaab ah ka helin. Waxay isku dayeen in ay ka leexdaan dhamaan su’aalaha oo mararka qaar waxay ila muuqatay caruur nimo.
Markii aan isaga tagay Budhisimka waxaan ku safray caalamka waxaan la kulmay diimo badan oo qabiilada ay isticmaalaan qaar badan waxaan ka helay xaqiiqooyin dhab ah balse waan u aqbali waayay in ay yihiin diin dhamaystiran.
Waxaan dareemay jahwareer oo waxaan go’aansaday in aan iska indho tiro xaqiiqada. Waxaan is dhahay maba jirto xaqiiqo oo macquul ma ahan in ilaahay uu diin gooni ah u sameeyo koox kasta. Kama dambeystii waxaan go’aansaday in aan ducaysto. Waxaan ku ducaystay “Ilaahoow haddii aad jirto i hanuuni, wadada saxda ah ugu hanuuni” markaas ayay ii furantahay wadada aan ku helay Islaamka.
Islaamka waxaan ka aqaanay waxyar oo aan ka arkay telefishinada, balse waxaa i cajabiyay markii aan akhriyay Quraanka iyo guud ahaan Islaamka. Markasta oo aan Quraanka akhriyo waxaa ii soo baxday xaqiiqo iyo jawaabaha su’aalihii aan qabay. Farkhiga ugu weyn ee Islaamka kaga duwan yahay diimaha kale ayaa ahaa farqiga loo dhaxaysiiyay Abuurka iyo Abuuraha. Muslimiintu waxay caabudaan Abuuraha. oo keliya. Inta badan diimaha kale waxay ku qaseen in la caabudo abuurka ama lala xiriiriyo ilaahay.
Markii aan akhriyay Quraanka waxaa isku soo ururay dhamaan waxyaabihii kala duwanaa ee aan ka bartay diimaha kale iyagoo hada aan fahmay waxyaabo badan oo aanan horey u fahmin. Quraanka waa buuga nolosha guud ahaanteeda.
Waxaan jeclahay in aan ugu baaqo dhamaan dadka in ay akhriyaan Quraanka, Xaqiiqada islaamku waxay ku taalaa Quraanka. Islaamka aan ka maqalno reer galbeedka iyo telefishinada ma ahan midka saxda ah. Waxaan idin rajeynayaa Guul!
Intaas ayuu ku soo afjaray Bruce safarkiisii dheeraa.
Masha alah. Bruce waxa uuhelay xaqiiqda dhabta ah. Sida ushegayna t.v.yada rer galbeedka diinta islaamka ay shegan ma ahan diinta islaamka sidaytahay. Taa macnaheeda way kabeen shegan sida kucad hadalkisa. Walaalaha muslimka ah waxan kacodsanayaa inay t.v.yada rer galbeedka e dadka an muslimka aheyn usheegaya beenta si ay ugacararaan dintena macan inaad tustaan wanaga iyo macaanka . Macnahayga uladhaqma sida uguwanagsan oo hatusine naceyb waa christan waa hindu.
MASHA ALLAH ilahay inta hartayna ha so hanuuniyo gaalada
a s c masha allah hanunka alla hayo bal ninkas arka sida lo wafajiye xaqiqda iyo dinta dhabta ah e islamka wu so warege wuna ku so qanci waye dimihi kale kow waxa la wafajiye dinta u heste e kirishtanka in aysan ahen dinta dhabta ah kadibna dimaha kale in u so ogado waxa ay yihin aya la wafajiye kadibna ugu danbentina waxa la wafajiye dimaha tan ugu xaqiqda badan e dhabta ah e islaanka ninkas dinta islamka qate iyo walaalaha islamka o dhan ayey u tahay gul tas allahayow inti an hanunsanen so hanuni allahayow inti hanunsan na hanunka ku wari amiin rerahisa o idilna allaha uga dhigo qudwad ay ku daydan sida u nabi mohamad c s w s l m unogu ahay qudwad an ku dayano dhaman musliminta manta ila hada iyo yomudinkana nogu yahay wan ku faraxsanahay aninkan wana i farxad galiye arinkan allahamdulilah a s c
Ina libaax san jabiye says:
Masha Allah : Ilaah hana wada hanuuniyo dhamaanten Allo adamaha idil oo aniga ku jiro Allo watada toosan naku wafiqi!
asalaamu calaykum.ugu horayn waxan aad iyo aad ugu bahadnaqayaa jimcaale iyo bahda somaliska ee mowduucan so bandhigtay, waxanan leeyahay illaahay ha idnka abaal mariyo.
marlabaadka, waxan u arkaa mowduucan inla soo bandhigo dadka cusub ee ku soo kordhaaya diinteena qiimaha badan wa arin faaiidadiisa iyo ajirkiisaba leh.
maxad umalaynaysaa qof qudha oo akhiryey deedna ku farxay qiimaha ay leedahay, iskaba daa mid ay dhiiri kalin u noqotay o.
illaahay islaamka ha quweeyo oo inuu xaqyahay dadka ha tuso.waad mahad santihiin wsc.
Asc, aad baan ugu farxay xaqiiqdii walaalkeena diinta islaamka qaatay ee Allaha na xafido asaga iyo annagaba. Walaalahayga webkan qorana waxan xusuusin lahaa iney magaciisa Islaamka ku soo qoraan halkii ay adeegsan lahaayeen magaciisii ka hor intuusan islaamin.
asc , dhamaan umada muslimiinta ah qaasatan walal heyga somaliyeed ,
bruce allah baa jeclaaday qofkuu allah ladoono in uu haniino inbaa hanuun . yaa rabbi nahanuuni ,. jimacaale shaqa fiican baa heysaa ee haka daalin , waa aadna wahadsan tahay , sida aad noogu soo gudbisay .
alaa ma ooya qofkii rabi jeceyl yahay waka mansha aalah
asc wasalamantihiin kuligiin barbaarta kuxiriirta bogaanayto runtii ninkaan ilaahey ayaa hanuuniyay dadaalna wuulayimid waxaa jiro dadbadan oodoonayo inay islaamka waxkaogadaan lkn midiyaha ayaaba kaawood batay sababtoo ah muslinkii larabay inay cawiyaan ayaabo xanaaq iyo fudeed kamuuqdaa taladayda aan usoo jidinayaa waxawaaye hadaad shekaysataan dadka galada ah usheeg dintaan muslinka inay wanaagsan tahay oo ay kuficantay hakaa diido lkn adiga waxaa kadhacaya culees kaa horimaan lahaa qiyamaha sbtoah imashegin uu kudhahaya wana isnaqanay wabilahi towfiq
Maasha alaah, magaca Bruce halaga badalo.
as maasha allaah walaalayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin sidaad u wadaan barnaamijyada waxaan idin leeyahay sii wada dadaalkiina allena kheyr haydin siiyo ciyaalkiibaba jeclaaday somaliska.
masha allah illahba hanunka baxsho allow inta dhimana so hanuni amin amin amin
aamiin aloow soo ahnuuni gaal iyo muslim macal anaga nagu dil hanuunkaga